တော်လှန်ရေးသတင်းသမားတဦးရဲ့ ဒုိုင်ယာရီ (၄၄) ~ Htet Aung Kyaw
DVB က ၀န်ထမ်းတွေအပါဝင် နော်ဝေးရောက်မြန်မာအတော်များများဟာ ထုိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်ဆီ (အခုဆုို ရန်ကုန် အထိ) မကြာခဏပြန်လည်လေ့ရှိပေမယ့် နော်ဝေးနုိုင်ငံအတွင်း၊ အထူးသဖြင့် နေမ၀င်အလှနဲ့ နာမည်ကြီးလှတဲ့ နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်းဆီ သွားရောက်လည်ပတ်သူ အတော်နည်းပါတယ်။
(နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်းရှိ Tromsø မြို့မှ နာမည်ကြီးတံတားနဲ့ ဘုရားကျောင်း) ဓာတ်ပုံ- wikipedia.
ဈေးကြီးလွန်းတောင်ကြောင့်မသွားဖြစ်တာလုို့ တချို့ကပြောပြီး တချို့ကတော့ အဲဒီအရပ်မှာ မြန်မာတွေ မရှိလုို့ မသွားဖြစ်တာလုို့ ဖြေကြပါတယ်။ ဒီလုိုဈေးကြီးပြီး မြန်မာတွေမရှိသေးတဲ့အရပ် နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်း က (Tromsø) ထရွန်ဆွန်းမြို့ဆီ ၂၀၀၉ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၂ ရက်နေ့မှာ ကျနော်ရောက်သွားပါတယ်။
အသွားအပြန်မှ ၄ ရက်တည်းဆုိုတော့ ထုိုင်းကိုသွားသလုို ရက်ရှည်ခွင့်ယူစရာမလုို။ ဒါပေမယ့် ၃ ညအိပ် ၄ ရက် ခရီးစဉ်အတွက် ဟုိုတယ်ခန်းနဲ့ လေယဉ်ခက ခရုိုနာ ၄၀၀၀ (ဒေါ်လာ ၆၀၀ နီးပါးဆုိုတော့ နော်ဝေး-ထုိုင်း လေယဉ်ခနီးနီးပါးရှိပါတယ်) ၀န်းကျင် ပေးလုိုက်ရပါတယ်။ ည ၇ နာရီခွဲမှ အော်စလိုကနေ စထွက်ပေမယ့် ဇွန်လ ၂၂ ဟာ ဥရောပရဲ့နေ့တာအရှည်ဆုံးရက်ဆုိုတော့ နေရောင်ကတောက်ပနေဆဲ။
တဆောင်းလုံး အခန်းအောင်းခဲ့ရသမျှကို အတုိုးချပြီး ဒီလုိုနေသာချိန်မှာ အော်စလုိုသူ၊ အော်စလုိုသားတွေ အားလုံးနီးပါး ပန်းခြံတွေ၊ ကမ်းခြေတွေဆီသွားကြပါတယ်။ အပူချိန်ကလည်း ၂၀ ဒီဂရီကျော်တဲ့အတွက် ရေကူးကြ၊ တချို့ဆုို ကုိုယ်တုံးလုံးချွတ်ပြီး နေပူစာလှုံကြပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအများစုကတော့ ဒီယဉ်ကျေးမှုနဲ့ သိပ်အကျွမ်းတ၀င်မရှိသေးတဲ့အတွက် ကုိုယ့်ဘာသာလူစု၊ အရက်ဝုိုင်းဖွဲ့သောက်တာက များနေတုန်းပါ။
အဲဒီလုို အပူချိန် ၂၀ ကျော်ရှိတဲ့အော်စလုိုကနေ လေယဉ်ထွက်လာပြီး ၄၅ မီနစ်လာက်ကြာတာနဲ့ ရေခဲတောင်တွေကုို လှမ်းမြင်ရပါတယ်။ ရာသီဥတုက မြို့တော်အော်စလုိုနဲ့ မြောက်ပုိုင်းမြို့တွေကြားမှာ အတော်ကွာခြားပုံရပါတယ်။ နော်ဝေးဟာ တနသာင်္ရီတုိုင်းနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး အရှေ့-အနောက် ကျဉ်းမြောင်းသလောက် တောင်-မြောက် အတော်ရှည်လျားတဲ့ ပထ၀ီအနေထားရှိပါတယ်။ ဒီတော့ အော်စလုိုနဲ့ ထရွန်ဆွန်းရဲ့ ရာသီဥတုကလည်း ထားဝယ်နဲ့ ပူတာအုိုလုို ကွာခြားနေတာဖြစ်နုိုင်ပါတယ်။
ထရွန်ဆွန်းကို လေယဉ်ဆုိုက်တော့ ည ၉ နာရီကျော်နေပြီ။ ဒါပေမယ့် နေရောင်က အော်စလုိုထက်တောင် တောက်ပနေသေး။ အပြင်ရောက်တော့ နည်းနည်းအေးစိမ့်စိမ့်။ အပူချိန်ကုိုကြည့်လုိုက်တော့ ၁၀ ဒီဂရီ ကျော်ရုံလေး။ လေယဉ်ကွင်းဘတ်စ်ကားပေါ်ကနေဆင်း၊ ဟုိုတယ်မှာပစ္စည်းထားပြီးထွက်လာတော့ ၁၁ နာရီကျော်နေပြီ။
(မြောက်ဝင်ရုိုးစွန်းမှ သန်းကောင်ယံနေ) ဓာတ်ပုံ- wikipedia.
‘'သန်းကောင်ယံနေကုိုကြည့်ချင်လုို့၊ ဘယ်နားကနေကြည့်ရင် အဆင်ပြေမလဲ’’ ဆိုပြီး ဟိုတယ်ကောင်တာမှာမေးတော့ ‘’တံတားကြီးရှေ့က ဘုရားကျောင်းကိုသာသွားပါ။ အဲဒီနေရာ အကောင်းဆုံးပဲ’’ လုို့ ဟုိုတယ်ဝန်ထမ်းတဦးက အကြံပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကုိုယ်က ဒီမြို့ကိုတခါမှ မရောက်ဖူးတော့ အဲဒီတံတား ဘယ်နားရှိမှန်းမသိ။ တက္ကစီ ငှားရင်ကောင်းမလားဆိုတော့ နီးနီးလေး လမ်းလျောက်သွားလို့ရတယ်ဆုိုပြီး သူကလမ်းညွန်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းသုံး တီဗွီ ကင်မရာအိတ်နဲ့ ထရုိုင်ပွတ်တုိုင်ကြီးကုို ထမ်းပြီးသွားနေရတာဆုိုတော့ အိပ်မက်ထဲ လမ်းလျောက် နေရသလုိုပါပဲ။ တံတားဆီကိုမရောက်နုိုင်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်။ အချိန်ကလည်း ၁၁ နာရီခွဲ နေပြီ။ ဟုိုမှာတွေ့ပြီ၊ တံတား။ ဒါပေမယ့် ဘုရားကျောင်းက တံတားရဲ့ဟုိုဖက်ထိပ်မှာ။ မြစ်အကျယ်က ပေ ၂၀၀ လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ မတတ်နုိုင်။ အပြေးတပုိုင်းနဲ့လျောက်လုိုက်တော့ ၁၂ နာရီထုိုးဖို့ ၁၅ မီနစ် အလိုတိတိမှာ ဘုရားကျောင်းရှေ့ ကင်မရာ ဆင်ခွင့်ရပါတယ်။
ကျနော့်အရင်ရောက်နေသူတွေ ရာနဲ့ချီရှိပေမဲ့ ကျနော်ကင်မရာကြီးနဲ့ ပျာယာခတ်နေတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီး တချို့က နေရာဖယ်ပေးကြပါတယ်။ အနောက်ဖက်တောင်စွယ်မှာ ကွယ်တော့မလုိုလုိုဖြစ်နေတဲ့နေလုံးကြီးကုို အသေချာ ချိန်ရုိုက်။ သန်းကောင်ယံရောက်ဖို့ ၅ မီနစ်အလိုအထိ နေလုံးကဖြေးဖြေးနိမ့်ဆင်းနေပေမဲ့ ၅ မီနစ်နောက်ပုိုင်းမှာတော့ နေလုံးက ဆက်မဆင်းတော့ပါ။ ဘေးကိုနည်းနည်းရွှေ့သွားပြီး ၁၂ နာရီနောက် ပုိုင်းမှာ အပေါ်ကုိုနည်းနည်း ပြန်ထောင်တက်လာတယ်လို့ ခံစားမိပါတယ်။
သန်းကောင်းယံနေကုို မီနစ် ၂၀ နီးပါး မနားတန်း မှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့နောက် ဒီနေရောင်ကုို တကူးတကာ့လာ ကြည့်ကြတဲ့လူတွေကို အင်တာဗျုးလုပ်ပါတယ်။ အများစုက နော်ဝေးတွေမဟုတ်။ အင်္ဂလန်၊ ဂျာမဏီ၊ စပိန်ဖက်ကနေ လာကြည့်ကြသူတွေ။ ဘေးနားကဘုရားကျောင်းမှာတော့ သန်းကောင်ယံ ဆုတောင်း ပွဲလုပ်နေလေရဲ့။
ည သန်းကောင် ၁၂ နာရီနဲ့ မနက် ၁ နာရီကြား နေရောင်ကုို အရင်က ကျနော်တခါမှမမြင်ဖူးတော့ ဘယ်လုိုရှင်းပြရမှန်းမသိပါ။ လပြည့်ညအလင်းရောင်ထက် ၁၀ ဆ လောက်ပိုလင်းတယ်ပြောရမလား။ နေ၀င်ချိန် တိမ်တောက်နေတဲ့ အလင်းရောင်မျိုးလုို့ဆုိုနုိုင်မလား။ နှိုင်းပြစရာမရှိသေးတဲ့၊ ဒီနေရာကို ရောက်ပြီး ဒီလုိုကြည့်မှ သိနုိုင်တဲ့ အလင်းရောင်မျိုးလုို့ပဲ ဆိုရမလား။ အရှေ့တောင်အာရှသားတဦးအဖုို့ ဘယ်လုိုမှနားလည်ဖုို့မလွယ်တဲ့ သဘာဝတရားရဲ့ ထူးခြားချက်တွေပါပဲ။
တကယ်တော့ ဒီနေရာကုိုရောက်တာနဲ့ ဒီလုို သန်းကောင်ယံနေကို မြင်ရနုိုင်တယ်ဆုိုပြီး ပုံသေတွက်ထားလုို့ မရသေး။ ကံတရားကလည်း ကုိုယ်ဖက်ပါဖုို့လုိုပါသေးတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆုိုရင် အဲဒီ ရောက်စညမှာပဲ နေ သာပြီး ကျန်တဲ့ ၂ ရက်လုံးလုံး တိမ်ထူနေတဲ့အတွက် အဲဒီနေကုို နောက်ရက်တွေမှာ ကျနော်မြင်ခွင့်၊ ရုိုက်ခွင့်မရတော့ပါ။ ဒီတော့မှ သတင်းသမားတွေပြောနေကြစကားဖြစ်တဲ့ ‘’အခွင့်အရေးဆုိုတာ ၂ ခါမရဘူး’’ ဆိုတာကုို သဘောပေါက်လုိုက်ပါတယ်။
(သန်းကောင်ယံနေ အဆင့်ဆင့်ပြထားပုံ) ဓာတ်ပုံ- wikipedia.
တချိန်တည်းမှာပဲ ‘’နေထွက်ရာအရပ်သည် ရှေ့အရပ်ဖြစ်ပြီး နေ၀င်ရာအရပ်သည် နောက်အရပ်ဖြစ်သည်’’ ဆုိုတဲ့ ငယ်ငယ်ကသင်ဖူးတဲ့ ပထ၀ီ ဖတ်စာကုို ပြန်သတိရမိပါတယ်။ အခုတော့ နေလုံးကြီးက အနောက်မှာ လညးမ၀င်၊ အရှေ့မှာလည်း မထွက်။ အရုဏ်တက်ချိန်ကိုစောင့်ပြီး ဆွမ်းကပ်လုို့လဲမရ။ တောင်စွယ်မှာနေ ကွယ်ရင် သတ်စေဆုိုတဲ့အမိန်န့်တွေလည်း ဒီအရပ်မှာ အလုပ်မဖြစ်တော့။ နေထွက်ကနေ နေ၀င်အထိ အလုပ်လုပ်နေရပါတယ်ဆုိုတဲ့လူတွေလည်း ဒီလုိုနေရာမျိုးဆုို ၂၄ နာရီ လုပ်နေရမဲ့ကိန်း။
တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆုိုရင်တော့ အမြဲတန်းအမှန်တရားတခုအဖြစ် ကမ္ဘာကြီးရဲ့ဒေသတခုရှိလူတွေက ယုံကြည်စွာသတ်မှတ်ထားတဲ့ အမှန်တရားဆုိုတာဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့အခြားတနေရာမှာ မှန်ချင်မှမှန်မယ်။ အမှန်တရားဆုိုတာဟာ ကမ္ဘာကြီးလည်သလုိုပဲ လည်နေသလားဆုိုပြီး နေမ၀င်ညမှာ ကျနော်စဉ်းစားနေ မိပါတယ်။ ။
နေမ၀င်ခရီးစဉ်ပြီးတော့ နေမထွက်တဲ့အရပ်ဆီ ခရီးတခုသွားဖြစ်လုိုက်ပြန်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နေမ၀င်တဲ့အရပ်နဲ့ နေမထွက်တဲ့အရပ်ဟာသီးခြားစီမဟုတ်။ ရှေ့မှာတင်ပြခဲ့တဲ့ နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်းဟာ နွေမှာ ၃ လလောက် နေ မ၀င်သလုို ဆောင်းမှာ ၃ လလောက် နေ မထွက်ပါ။
(မြောက်လတ္တီကျု ၆၆.၃၃၊ အာတိတ်စက်ဝန်းဖြတ်သွားတဲ့နေရာ)
၂၀၁၀ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီ ဆောင်းတွင်းကာလမှာ ကျနော်ရောက်သွားတဲ့နေရာက နော်ဝေးမြောက်ပုိုင်း (Tromsø) ထရွန်ဆွန်းမြို့နဲ့ လတ္တီကျုတူတဲ့ နော်ဝေး၊ ဆွီဒင်၊ ဖင်လန် ၃ နုိုင်ငံနယ်စပ်အနီးရှိ (Rovaniemi) ရုိုဗာနီယာမီမြို့ပါ။ မြောက်လတ္တီကျု ၆၆.၃၃ အရပ်မှာရှိတဲ့ ဒီမြို့ဟာ အာတိတ်စက်ဝန်းဖြတ်သွားတဲ့အပြင် (The Santa Claus Village) စန်တာခရု ကျေးရွာရှိတဲ့အရပ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
၆၆.၃၃ ဖြတ်သွားတဲ့နေရာမှာ အဖြူရောင်လုိုင်းတားပြီး မီးအိမ်တန်းတခုလည်းစုိုက်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းတွင်းကာလ ဆီးနှင်းကသိပ်ထူနေတဲ့အတွက် မီးအိမ်တန်းကိုသာမြင်ရပြီး မြေပြင်အနေထား အတိအကျကုို မမြင်နုိုင်တော့ပါ။ ဒီမီးအိမ်တန်းဘေးက ဘုရားကျောင်းလုိုအဆောက်ဦထဲမှာတော့ Santa Claus နဲ့ တွေ့ခွင့်ရဖုို့ တန်းစီးတုိုးနေသူတွေက မနည်းလှ။
ဒီခရီးစဉ်ကုို စတင်အဆုိုပြုသူကတော့ ABSDF တပ်ရင်းတခုတည်းမှာ ၁၀ နှစ်နီးပါး အတူတာဝန်ထမ်းခဲ့ပြီး အခု ဖင်လန်မှာအခြေချနေထုိုင်နေသူ ရေဇင်းစုိုက်ပျိုးရေးတက္ကသုိုလ်ကျောင်းသားဟောင်း ကိုအောင်မော်။ သူ့ဆီ သွားလည်သူက နော်ဝေးက ကျနော်နဲ့ ဟုိုး…အုိုဇုိုးလွှာပေါက်နေတဲ့အရပ် သြစတေလျကနေ ရောက်လာသူ ကိုဖုိုးချို။ ဖင်လန်နဲ့ နော်ဝေးက ရာသီဥတု သိပ်မကွာပေမဲ့ သြစီမှာတော့ ဖေဖေါ်ဝါရီဟာ နွေလည်ခေါင်ခေါင်ကြီး။ ဒါပေမယ့် ၃ ဦးစလုံးရဲ့ မူလဘူတက ထားဝယ်သားတွေဆုိုတော့ ဒီလုို နှင်းတောတွေ၊ မြောက်ဝင်းရုိုးစွန်းတွေ၊ လတ္တီကျု ၆၆.၃၃ မြောက်ဆုိုတောတွေ၊ အာတိတ်စက်ဝန်း ဆုိုတာတွေကို ပထ၀ီ စာအုပ်ထဲမှာဖတ်ဖူးတာကလွဲပြီး တခါမှမြင်ဖူးကြ သူတွေမဟုတ်ပါ။
ဒီနေရာကိုရောက်နုိုင်ဖို့အတွက် ဟုိုး ဖင်လန်တောင်ပုိုင်းရှိ မြို့တော် (Helsinki) ဟယ်စကီကနေ ကီလုိုမီတာ ၁၀၀၀ ကျော် ကားမောင်းလာရတာပါ။ ဆောင်းတွင်းကားမောင်းရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလှ။ ကားဘီးတွေအားလုံးမှာ သံဆူးချွန်တွေနဲ့။ ဒါကုို ဆောင်းတွင်းတာရာလုို့ စကင်းဒစ်နုိုင်ငံတွေမှာ ခေါ်ကြပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလဆန်းကနေ မတ်လကုန်အထိ ဒီတာရာတွေကို မတပ်လုို့မဖြစ်။ ဆုိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး အားလုံး ဒီလုိုတာရာပြောင်းဖို့ ဥပဒေ ထုတ်ထားပါတယ်။
ဖင်လန်ဟာလည်း နော်ဝေးလုိုပဲ တောင်-မြောက်ရှည်တဲ့နုိုင်ငံဖြစ်တာကြောင့် ဟယ်စကီနဲ့ ရုိုဗာနီယာမီဟာ လည်း အော်စလိုနဲ့ ထရွန်ဆွန်းလောက်ဝေးမယ်ထင်ပါတယ်။ နော်ဝေးနဲ့ကွာကတော့ ဒီ လောက်ဝေးလံ ခေါင်းဖျားတဲ့ ဖင်လန်မြောက်ပုိုင်းမှာ မြန်မာတွေရှိနေခြင်းပါ။
(ဖင်လန်နုိုင်ငံ ကီမီမြို့ရှိ ရေခဲ ရဲတုိုက်)
ABSDF တပ်ရင်းတခုတည်းက ကုိုရဲမင်းအောင်ဟာ ရုိုဗာနီယာမီနဲ့အနီးဆုံးမြောက်ပုိုင်းမြို့ဖြစ်တဲ့ Kemi ကီမီမြို့မှာ ရောက်နေပါတယ်။ (Baltic) ဘောလတစ် ပင်လယ်ရဲ့အဆုံး ဖင်လန်နဲ့ဆွဒင်နယ်စပ်က ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ ရေခဲရဲတုိုက်ကလည်း အတော်ထင်ရှားပါတယ်။
ရေခဲခြစ်ရောင်းတဲ့၊ ရေခဲရေရောင်းတဲ့ ရေခဲတုံးလောက်ကိုသာတွေ့ဖူးတဲ့ ထားဝယ်သားတွေအတွက် ရေခဲရဲတုိုက်ဟာ အထူးအဆန်းပေါ့။ ရေခဲတုိုင်၊ ရေခဲအမုိုး၊ ရေခဲအကာ၊ ရေခဲအခင်း အားလုံး ရေခဲ တွေနဲချည်းဆောက်ထားတဲ့ ရဲတုိုက်ကြီး။ လျှပ်စစ်ရောင်စုံမီးလေး ခပ်မှိန်မှိန်ထွန်းထားတော့ လှလုိုက် သည်ဖြစ်ခြင်း။ ပြီးတော့ ရေခဲကုတင်တဲ့။ ဘယ်သူတွေ အိပ်နုိုင်မလဲတော့မသိ။ ရေခဲကုတင်ပေါ်မှာ ၀က်ဝံသရေအကောင်းစားကုိုခင်းထားပေးပါတယ်။
ဒီဖက်ခန်းမှာတော့ ရေခဲကော်ဖီဆုိုင်။ ရေခဲစားပွဲ၊ ရေခဲကုလားထုိုင်၊ ရေခဲရုပ်ထု၊ နောက်ဆုံး ရေခဲဆွဲကြိုးပါ လုပ်ပြထားတာကို အဲဒီရဲတုိုက်အတွင်းတွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ အရှေ့တောင်အာရှက ရောက်လာ သူတွေတင် မဟုတ်။ စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဂရိဖက်ကရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေကလည်း ကျနော်တုိ့လုိုပဲ ရေခဲရဲတုိုက်ကို အထူးအဆန်း ကြည့်နေကြပါတယ်။
‘’ရေမှာအရုပ်ရေးနေလုို့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး’’ ဆုိုတဲ့ စကားကုို ကျနော်အကြိမ်ကြိမ်ကြားဖူးခဲ့ပေမဲ့ အဲဒီရေကို ခဲအောင်လုပ်ပြီး ပန်းပုထုလုိုက်ရင် ဒီလုို ကမ္ဘာကျော်ရဲတုိုက်ကြီးဖြစ်လာနုိုင်တယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျနော်တခါမှ မတွေးခဲ့ဖူးတာ အမှန်ပါ။
သတင်းသမားတွေ သတိထားနုိုင်ဖို့ ကင်မရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆုိုရင်တော့ ဒီလုိုအေးတဲ့နေရာမှာ ကင်မရာကိုအပြင်မှာ သုံးချေင်းထောက်နဲ့ရုိုက်ရင် ပျက်စီးသွားနုိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကံကောင်းတာက ဒီတခေါက်ခရီးစဉ်မှာ ရုံးကလုပ်ငန်းသုံးကင်မရာကုိုမယူပဲ ကုိုယ်ပုိုင်ကင်မရာအသေးလေးကိုသာ ယူလာ မိလုို့တော်သေးတယ်။ အဲဒီကင်မရာငယ်ကုို ထောင်ပြီး နှင်းလျောစီးရင်း Report လုပ်တဲ့ပုံ ရုိုက်လုိုက်တာ ကင်မရက ပိတ်လို့မရ၊ ဖွင့်လုို့မရ၊ ဘာမှလုပ်မရဖြစ် သွားခဲ့ပါတယ်။ ပျက်သွားပြီလုို့ ထင်ပေမယ့် တကယ်က ပျက်တာမဟုတ်။ အေးလွန်းလုို့ Freez ဖြစ်သွားတဲ့သဘော။ အခန်းထဲပြန် ရောက်ပြီး မီနစ် ၃၀ ခန့်ကြာတဲ့အချိန်မှာ ကင်မရာက သူ့အလုိုလုို မီးပြန်လင်းလာပါတယ်။
ဖင်လန်က အဲဒီမြောက်ပုိုင်းမှာ ဘယ်လောက်အထိအေးသလဲဆုိုရင် အနှုတ် ၃၀ ဒီဂရီအထိရှိပါတယ်။ နှင်းတွေကလည်းကျလုိုက်တာအရမ်းပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီလောက်နှင်းကျနေရင် နှင်းလျောစီးလုို့ကောင်း တဲ့အချိန်မဟုတ်ပါ။ ဒါကုိုမသိ၊ နှင်းလျောလဲတခါမှမစီးဖူးတဲ့ ကျနော်တို့ဟာ ကုိုအောင်မော်ဆီက နှင်းလျောစီးကရိယာတွေ၊ ၀တ်စုံတွေငှားပြီး ဟန်ပြဓာတ်ပုံရုိုက်၊ ဟန်ပြ ရီပုဒ်လုပ်ရင်းနဲ့ ကင်မရာကြီးပါ စက်တော်ခေါ်သွားတဲ့အထိပါပဲ။
နောက်ထပ် မှတ်မိနေတဲ့အချက်တခုကတော့ ဖင်လန်က အိမ်တုိုင်းလုိုလုိုမှာ (Sauna) ဆောင်နာ (ဆွေးထုတ်ခန်း) ရှိပါတယ်။ နော်ဝေးမှာမရှိပါဘူး။ ဆောင်နာသွားချင်ရင် အားကစားရုံတွေဆီ အခပေးပြီးဝင်ရပါတယ်။ ဒီလောက် အေးတဲ့နေရာမှာ ချွေးထွက်အောင်လုပ်ဖို့အရေးက သိပ်မလွယ်လှ။ ဒီတော့ ဆောင်နာထဲဝင်ပြီး ချွေးထုတ်ရပါတယ်။ ချွေးတဒီဒီးစီးကျလာတဲ့အခါ ဆီးနှင်းပြင်ထဲ ပြေးထွက်ပြိး ရေခဲရေအုိုင်ထဲ ခုန်ချလုိုက်ရင် အပူ-အအေး Shock ရုိုက်သလုိုဖြစ်ကာ လူကအတော်လန်းလန်းဆန်းဆန်း ဖြစ်သွားလေ့ရှိပါတယ်။
နောက်တချက်အမှတ်ရနေတာကတော့ ရေခဲပြင်မှာ ငါးမျှားခြင်းပါပဲ။ မင်းသမီးစခန်းဘေးက တနသာင်္ရီမြစ် ထဲမှာသာ ငှားမျှားဖူးခဲ့တဲ့ ထားဝယ်သားတွေ ရေခဲပြင်မှာငါးမျှားတာကို ဘယ်တတ်ပါ့မလဲ။ ဒါပေမယ့် ကိုအောင်မော်ရဲ့သူငယ်ချင်း ဖင်း အိမ်နီးချင်းတဦးက ကျနော်တုို့ကိုအသေချာသင်ပေးပါတယ်။ နွေရာသီတုန်းက ရေကန်ကြီးဟာ အခုဆောင်းရာသီမှာ ရေခဲပြင်ကြီးဖြစ်နေပါတယ်။ အဲဒီရေခဲပြင်ကုို လွန်နဲ့တူးတော့ ရေခဲတွေပဲထွက်လာတာပေါ့။ အဲဒီလုို ရေခဲလွန်စာ တပေကျော်လောက်ထွက် လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ လွန်ကရေထဲရောက်သွားပြီ။ အဲဒီလွန်ပေါက်ထဲကုို ငှားမှားချိတ် ထုိုးထည့်။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့စောင့်နုိုင်ရင် ၁၀ မီနစ်လောက်ဆုို ငါးလာကုိုက်တယ်လို့ဆုိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အအေးချိန် အနှုတ် ၃၀ လောက်ရှိတဲ့ရေခဲပြင်မှာ ထားဝယ်သားတွေ ကြာကြာဘယ်ထုိုင်နုိုင် ပါ့မလဲ။ ငါး မရလဲနေတော့ဆုိုပြီး တညတာတည်းခုိုရာ ဆောင်းတွင်းတည်းခုိုခန်းငယ်လေး ဆီပြေးဝင်ကြ တာပေါ့။ ပုံမှန်အားဖြင့် ဆုိုရင်တော့ ဒီလောက်အေးတဲ့ရာသီဥတုအခြေနေမှာ ကွန်ကရစ်နဲ့ဆောက်ထားတဲ့ ဟုိုတယ်အကြီးကြီးတွေမှာ တည်းသင့်တယ်လို့ထင်မိမှာပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီစကင်းဒစ်နုိုင်ငံတွေမှာတော့ ကောင်းဘွိုင်ကားထဲကလုို သစ်လုံးအိမ်ငယ်လေးတွေမှာသာ ဂုဏ်ယူစွာတည်းလေ့ ရှိကြပါတယ်။ အမုိုးနဲ့ အကာက သစ်လုံးကြီးတွေ၊ အခင်းက သစ်သား အကြမ်းထည်။ အားလုံး သစ်တွေချည်း။ သဘာဝအတုိုင်းနေချင်သူတွေအတွက်ဆောက်ထားတာဆုိုတော့ အနွေးပေး စက်လည်းမရှိပါ။ ထင်းမီးဖုိုကြီးထဲ ထင်းတွေထည့်ပြီး မီးမွေးရတာကိုက အရသာတခု။ ဥရောပရောက် တောပြန်ရဲဘော်တွေအတွက်တော့ တချိန်ကတနသာင်္ရိုးမက သစ်ပင်တွေကြားရှင်သန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘ၀တွေကို အမှတ်ရစရာပေါ့။
အဲဒီလို ထူးဆန်းတဲ့သဘာဝအလှတရားတွေ၊ အရှေ့နဲ့အနောက်ရဲ့ကွာခြားချက်တွေ၊ အပူ-အအေး ဓာတ်တွေကို လေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာတော့ ကီမီမြို့က ကုိုရဲမင်းအောင်ရဲ့ နေအိမ်ဆီရောက်သွားပါတယ်။ သူရေးထားတဲ့ ဖင်လန်-မြန်မာ၊ ဖင်လန်-ကရင် အဘိဓာန်တွေကိုထုတ်ပြမှ တောပြန်ဆရာက အဘိဓာန်ပြုစုနေသူမှန်း သိခွင့်ရလုိုက်ပါ တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေစဉ်တုန်းကတော့ အဘိဓာန်ပြုစု တယ်ဆိုတာဟာ ဦးထွန်းငြိမ်းတို့လို၊ ဆရာယုဒဿန်တို့လို၊ ဆရာတက်တိုးတို့လို ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေနဲ့ သာဆိုင်ပီး ကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ထင်ထားပေမဲ့ ဒီမှာတော့ အဲဒီလို မဟုတ်တော့။
အစဉ်အလာအရ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေ တခါမှမရှိခဲ့ဖူးတဲ့၊ ရှိရင်လဲ ဆယ်ဂဏန်းထက်မပိုခဲ့ဖူးတဲ့၊ မြန်မာ သံရုံးလဲ တခါမှမဖွင့်ဖူးသေးတဲ့ ဒီ စကင်ဒီနေဗီယန်းဒေသမှာ သက်ဆိုင်ရာဘာသာစကားကိုသင်ဖို့ ဘာ အဘိဓာန်မှ မရှိသေးပါ။ အနောက်တိုင်းသားအားလုံး အင်္ဂလိပ်စကားပြောတယ်လို့ ထင်ထားခဲ့တဲ့ ဟိုး ရှေးရှေးကအမြင်တွေဟာလဲ ဒီရောက်တော့မှ လက်တွေ့နဲ့အထင် တလွဲစီဖြစ်နေခဲ့ပေ့ါ။ ဥရောပဟာလဲ ကျနော်တို့ အရှေ့တောင်အာရှက နိုင်ငံတွေလိုပါပဲ။ နိုင်ငံတခုချင်းစီအလိုက် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာ စကား တခုစီရှိနေတဲ့အတွက် အဲဒီနိုင်ငံမှာနေရင် အဲဒီစကားကို မပြောတတ်လို့မဖြစ်။ ဆိုလိုတာကတော့ အင်္ဂလိပ်စကားတတ်နေယုံနဲ့ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ အလုပ်မဖြစ်ပါ။
ဒါကြောင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့ စာပေနဲ့ မြန်မာစာပေအကြား ပေါင်းကူးသင်ပြနိုင်အောင် အဘိဓာန်တွေကို အခုမှ ရောက်လာတဲ့လူတွေ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီး ပြုစုနေရတယ်ဆိုပါတော့။ အလားတူ ပြုစုနေမှုတွေကို နယ်သာလန် ရောက်စဉ်ကလဲ ကျနော်တွေ့ခဲ့ရပြီး ကျနော်တို့ နော်ဝေးမှာလညး မကြာသေးခင်ကဘဲ့ နော်ဝေး-မြန်မာ အဘိဓာန် ထုတ်ဝေလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဘိဓာန်တွေဟာ ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ ဦးထွန်းငြိမ်းတို့၊ ယုဒသန်တို့လို ပညာရှင်တွေပြုစုတဲ့အဘိဓာန်မဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲကလူတွေက တကယ့်လိုအပ်ချက်အရပြုစုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာသာဗေဒအရ အားနဲချက်တွေရှိကောင်း ရှိနေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာတော့ တတိယ နိုင်ငံရောက်မြန်မာတွေအတွက် မရှိမဖြစ်လိုနေတဲ့ စာအုပ်တွေပဲ မဟုတ်ပါလား။ ။
နေမ၀င်အရပ်ရောက်ခဲ့စဉ်က ရုပ်-သံ မှတ်တမ်း
နေမထွက်တဲ့အရပ် ရောက်ခဲ့စဉ်က ရုပ်-သံ မှတ်တမ်း